သနပ်ခါးမေ: July 2011
By **~ မြတ်ကြည်~** 9:20 PM ဖက်ရှင်
မနေ့က ဟိုလှန်ဒီလှော လုပ်ရင်း ဖတ်မိတဲ့ msn က The Perfect Pair ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကို ပျိုမေတို့အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
နားထင်နှစ်ခုကြား အကွာအဝေးက နှဖူးမှ မေးစေ့ အကွာအဝေးထက် နည်းနည်းလေးပိုကျယ်တဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် သင့်တော်မယ့် cat eye ကိုင်းလေးပါ။ ယခုနှစ် ရဲ့ ရာသီစာလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လေးထောင့်ဆန်တဲ့ မျက်နှာကို ကိုင်းပြေပြေ လေးတွေ တပ်လိုက်ရင် ပြေပြစ်တဲ့ မျက်နှာအသွင် ရစေပါတယ်။ မျက်နှာ လေးထောင့်ကျမှန်း မသိသာတော့ပါဘူး။
ထောင့်ချိုးလေးတွေထည့်ထားတဲ့ ကိုင်းလေးတွေ ကတော့ မျက်နှာဝိုင်းတဲ့ သူတွေနဲ့ လိုက်ပါတယ်။
မျက်နှာ ဘဲဥပုံ ရှိတဲ့ ပျိုမေတွေ က ဘုရားပေးတဲ့ ဆု ရထားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဘယ်နေကာ ပဲ တပ်တပ် မျက်နှာနဲ့လိုက်ပြီးသားပါ။
Sporty Pair with Longer Lenses
ပျိုမေရဲ့ မျက်နှာကျက သွယ်တဲ့ အစားထဲမှာပါရင် ပါးထိ ကျနေတဲ့ မှန်ကိုင်းမျိုး နဲ့ အကိုက်ဆုံးပါပဲ။ မှန်တိုတဲ့ ကိုင်းသွားဝတ်မိရင် မျက်နှာရှည် မှန်း ပိုသိသာသွား မှာမို့လို့တတ်နိုင်ရင် ရှောင်စေချင်ပါတယ်။
မှန် size အကြီးစားတွေက မျက်နှာအစိတ်အပိုင်း ထင်ရှားတဲ့သူ ဥပမာပြောရရင် နှာတံပေါ်၊ နှုတ်ခမ်းထူ တဲ့ ပျိုမေတွေ နဲ့ပို ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ အဲလို facial features မျိုးမရှိရင်၊ ကိုယ့်မျက်နှာက မျက်မှန်ကိုင်းကြားမှာ ပျောက်သွားမှာပါ။
ပါးရိုးမြင့်မြင့်နဲ့ လှနေတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် ကိုင်းမပါတဲ့ မျက်မှန်လေးတွေက ပါးရိုးအလှကို ပိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။
သူ့ကိုဝတ်မယ်ဆို စည်းကမ်းနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ အရှေ့မှာပြောခဲ့သလို Facial features ကြီးရင် အကြီးရွေး၊ features သေး ရင် မှန် သေးတာရွေးပေါ့။ ဒါလေးလိုက်နာလိုက်ရင်၊ ဘယ်မျက်နှာမျိုးနဲ့မဆို အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို ပျိုမေတို့ နဲ့လိုက်မယ့် မျက်မှန်ကို ရှာတွေ့သွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကြုံရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ ပဲထုတ်ဖို့အတွက် ပေါပေါပဲပဲ မျက်မှန်တစ်လက် ဝယ်မလားလို့။
အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်သုံးပတ် အကြာမှ ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:00 PM ဖက်ရှင်
တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုခုရှိလို့ သူငယ်ချင်းတွေတွေ့တဲ့ အခါ "ဟယ်၊ ညည်း ဝ လာလိုက်တာ" လို့ အပြောမခံချင်၊ ဝိတ်ချဖို့အတွက်ကလည်း ရက် တော်တော်နီးနေပြီဆို နောက်ဆုံးလက်နက်အနေနဲ့ ဒါလေးကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
V ပုံလည်ပင်း ကတြိဂံ ဇောက်ထိုးပုံစံ ရှူးသွားတာကြောင့် ကြည့်သူအမြင်မှာ ရင်ချီပြီး ခါးကိုသေးစေပါတယ်။
အတွန့်လေးတွေပါတဲ့ ပဝါဆန်ဆန် ကာတီဂန်နဲ့ မမြင်စေလိုတဲ့ ကောက်ကြောင်းကို ကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်
ရင်ဘက်အောက်နားနေရာဟာ ခန္ဒကိုယ်ပြည့်တဲ့ သူတွေအတွက် အသွယ်ဆုံးနေရာဖြစ်တာကြောင့် ခါးပတ် ဒါမှမဟုတ် ကြယ်သီးတပ်ထားလိုက်ရင် ခါးရှိတဲ့ အမြင်ဖြစ်စေမှာပါ။
ခါးမြင့် စကတ်နဲ့ဘောင်းဘီတွေမှာ ခါးလိုင်းက တကယ့် ခါးနေရာရဲ့ အထက်မှာ ရှိတာကြောင့် ကခြေထောက်ကို ရှည်စေပြီး ခါးထွက်လာစေပါတယ်။
စကတ်အရှည်ဝတ်တာက ပေါင် မသွယ်တာကို လူတွေမသိစေပဲ ခြေထောက်လှလှလေးကို ပေါ်စေမှာပါ။
ဘောင်းဘီအတွက်ဆို သိပ်ကျပ်လွန်းတာတွေ မဝတ်တာကောင်းပါတယ်။
လေးတဲ့ ပိတ်စသားနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အဝတ်တွေက ပွတာတို့ တစ်ရစ်ထွက်တာမျိုး မရှိစေတဲ့အပြင် လှုပ်ရှားတိုင်း ကိုယ်နဲ့တသားတည်း ဖြစ်စေပါတယ်။
ကျွန်မငယ်ငယ် က ဆရာမ က ဒါလေးကို မောင့်သဘော အင်္ကျီလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကြိုးဖြည်ဖို့ပဲလိုတာမဟုတ်လား ? :P
ရင်နားမှာရှိတဲ့ အတွန့်လေးတွေက ကြည့်တဲ့သူ ရဲ့ အာရုံကို ဗိုက်သားနဲ့တင်ပါးတွေဆီ မရောက်အောင် ထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။
1) အရောင် ရင့်ရင့်၊ ဒေါင်လိုက်စင်း ---> လူကိုပိန်စေပါတယ်။
2) အရပ်ကိုပိုပြီး ရှည်တယ်ထင်ရအောင် အရောင်ကို အပေါ်အောက်ဝမ်းဆက် ဝတ်ပါ။
3) ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် ---> စီးဖူးသူတိုင်းသိကြမှာပါ။ ခါးထွက်စေတယ်လေ။
4) မမြင်စေချင်တာလေးတွေ ဖုံးဖိဖို့ ပိုက်ဆံအိတ်/ လက်ပွေ့အိတ် လှလှလေးတစ်လုံး လိုပါမယ်။
5) ဖန်စီ ဆွဲကြိုးအရှည်လေးတွေ ဝတ်တာကလည်း Vလည်ပင်းပုံ လိုမျိုး အမြင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
6) အောက်မှာ ကော့ဆက် ခံဝတ်လို့လည်းရပါတယ် (နည်းနည်းတော့ နေရခက်တာပေါ့နော်)။
ဖတ်ဖူးတာလေးတွေကို စုစည်းပြီးဝေမျှလိုက် တာပါ။ စာဖတ်သူပျိုမေတွေ အဆင်ပြေကြရဲ့လားမသိ။ "ပြီးပြည့်စုံအောင် စတိုင်လ်ကျတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ၊ မလှတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ကွယ်တတ်ပြီး၊ လှတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို လူမြင်သာအောင် လုပ်နိုင်တဲ့သူသာဖြစ်ပါတယ်" တဲ့။
(အလှအပရေးရာမှာ ရေးစရာအကြောင်းတွေ စုနေတာနဲ့ စာဖတ်သူတွေ ရှာရလွယ်ကူအောင် ဖက်ရှင်ကို ကဏ္ဌလေး တစ်ခုအနေနဲ့ ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သနပ်ခါးမေ ဘလော့လေး ယခုထက် ပိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက် ပျိုမေတွေအနေနဲ့ အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ရင် ဝေဖန်အကြံပြုစာများကို ရေးသားနိုင်ပါရှင်။ ဝိုင်းဝန်းပြီး အကြံပြုပေးကြပါဦးနော်။)
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:03 PM Website လမ်းညွှန်
သီချင်းနှစ်သက်တဲ့ ပျိုမေတွေ အတွက်မြန်မာပြည်မှ သီချင်းတွေကို နားထောင်ရုံတင် မဟုတ်ပဲ၊ ကိုယ်တိုင်သီဆိုနိုင်တဲ့ site လေးပါ။ www.singforyou.net ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဆိုထားတာကို အလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရတာမို့ အမှတ်တရသိမ်းထားချင်သူတွေ သဘောတွေ့ကြမှာပါ။ အချင်းချင်း comment/ratingတွေ အပြန်အလှန်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ sign-up လုပ်ဖို့တော့လိုပါမယ်။
ကိုယ့်သီချင်းလေးတွေ ကို quality ကောင်းကောင်းနဲ့ အသံသွင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Audacity ကို ထည့်ထားဖို့ မှာလိုက်ပါရစေ။ အသုံးပြုရ ရိုးရှင်းပြီး၊ ကျွမ်းကျင်ရင် effects တွေလည်း ထပ်ထည့်လို့ရပါသေးတယ်။ singforyou.net မှာဆိုရင်းနဲ့ credit ကုန်သွားရင်လည်း ဒါလေးနဲ့ ဆက်ပြီး အသံသွင်းလို့ရ တာကြောင့်၊ credit ကုန်မှာ မပူပင်ရတော့ဘူးပေါ့။ Audacity ကို download ဆွဲမယ်ဆို လိပ်စာက http://audacity.sourceforge.net/download/ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ ဒါလေးတွေနဲ့ ကျွန်မ ဘဝရဲ့ V.I.P အတွက် ရန်ကုန်ပြန်ရင် သီချင်း လက်ဆောင်ပေးဖို့ အသံသွင်းနေပါတယ်။ ကျွန်မ အသံကြားပြီး လာလည်ချင်စိတ်ပျောက်ကုန်မှာ စိုးလို့ မ share လိုက်တော့ဘူး နော်။ :)
သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ် နေ့ဖြစ်ပါစေရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 6:39 PM တိုတိုထွာတွာမှတ်စရာ
သုတေသနပြုချက် အရ အမျိုးသမီး ၁၀ ယောက်မှာ ၇ ယောက်ဟာ၊ Bra size အမှား တွေကို ဝတ်နေကြပါတယ်တဲ့။ ဒီလို ကိုယ်နဲ့မကိုက်တဲ့ နံပါတ်တွေကို ဝတ်နေတာဟာ၊ ရင်သားကို အရွယ်မတိုင်ခင် လျော့တွဲတာတို့၊ အချိုးမကျတော့တာတို့ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် bra size ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ အတိအကျတော့ သိဖို့လိုတာပေါ့နော်။
ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး (ဝတ်ရတာ fitting အကျဆုံးလို့ထင်တဲ့) အခုအခံ မပါတဲ့ bra တစ်ထည်၊ ပေကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့၊ (ကိုယ်တိုင်တိုင်းရင် အဆင်မပြေတာတွေရှိတာမို့) တိုင်းပေးမယ့် အဖော်တစ်ယောက်လိုပါမယ်။
ပုံမှန်နှင့် ရင်အုံဖွံ့ဖြိုးသူတွေ အတွက်
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ရင်အုံ ဆုံးသွားတဲ့ နေရာမှာ ပေကြိုးကို ကိုယ်တစ်ပတ် တိုင်းပါ။( ပေကြိုးသည် မြေပြင်နှင့်အပြိုင်ရှိပါစေ) ရလာတဲ့ ဂဏန်းကို ၅ ပေါင်းလိုက်ရင် band size ရပါပြီ။
အကယ်၍ ရလာတဲ့ နံပါတ်က မ ဂဏန်းဆိုရင်၊ တစ် ပေါင်းပေးရပါမယ်။ Band size တွေက စုံဂဏန်း ပဲ လာတာကြောင့် ပါ။
ဒုတိယအဆင့် အနေနဲ့ ရင်သားအပြည့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့နေရာကို တစ်ပတ် တိုင်းရပါမယ်။ ရလာတဲ့ နံပါတ်က Cup size ဖြစ်ပါတယ်။
Cup size ထဲ က Band size ကို နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ရလာတဲ့ ကွာခြားချက် ဂဏန်းဟာ A, B, C, D သက်မှတ်ပေးတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။
Band Size= 36" Cup size 32" ---> (36 - 32 = 4) (4 = D)
ပျိုမေ့ Bra size က 36D ဖြစ်ပါတယ်။
Cup size ကိုရဖို့အတွက် ညာဘက်ရင်သား အစက နေ ဘယ်ဘက်ရင်သား ဆုံးသွားတဲ့နေရာအထိ ပေကြိုးနှင့်တိုင်းပါ။ ရလာတဲ့ ဂဏန်းကို Band size ထဲမှ ပြန်နှုတ်ပေးပါ။
Band size = 34", Cup size = 26"---> (34 -26 =8") (8=B)
ပျို့မေ့ bra size က 34B ဖြစ်ပါတယ်။
ပျိုမေတို့ သက်တောင့်သက်သာရှိရှိ ဝတ်နိုင်ပြီး ရင်သားအလှ မပျက်စေဖို့၊ ကိုယ်နဲ့ကိုက်မယ့် bra size ကို ရွေးဝယ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 6:48 PM အစားစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း (Diet and Exercise)
အားကစားအတွက် အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ပျိုမေများ အတွက် တစ်နေ့ဆယ်မိနစ်စာ အချိန်ပေးရုံနဲ့ ဗိုက်သား သိသိသာသာ ကျစ်လစ်လှပစေမှာပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကို Good Housekeeping (Digital Edition) မှ ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ အနှစ်သာရကတော့ ဗိုက်မှာရှိတဲ့ DeepTransverse Abdominalis ကြွက်သားကို ကျစ်လစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးကို ခေါင်းအောက်မှာထား၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဗိုက်ပေါ်တင်၊ ဗိုက်ကိုကျောနဲ့ကပ်တဲ့အထိ လေကိုတဝကြီးရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ စာအုပ် နစ်ဝင်သွားတဲ့နေရာဟာ DeepTransverse muscle ရှိတဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားနည်း အသေးစိတ်ကို ကြည့်ကြရအောင်နော်။
ကြမ်းပြင်ဆီသို့ မျက်နှာမူ၍ ကိုယ်ကို ဆန့်တန်း ထားပါ။ ကိုယ်ရဲ့ အလေးချိန်သည် တံတောင်နှင့် ခြေဖျားပေါ်တွင်ရှိပါစေ။ ထိုအနေအထားကို စက္ကန့် ၁၀ မှ ၂၀ အထိ ထိန်းထားပေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(A) လူကို ဘေးဆောင်းအနေအထားနှင့် ဆန့်ထားပြီး ဘယ်ခြေကျင်းကို ညာခြေကျင်းပေါ်သို့ ချိတ်ပါ။ ကိုယ်ကို ညာလက်ဖြင့် ထောက် ထားပြီး ဘယ်ဘက် လက်ကို ဦးခေါင်းအနောက်တွင်ထားပါ။
(B) ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကို သုံး၍ ဘယ်တံတောင်ကို ကြမ်းပြင်နှင့် မျင်းပြိုင်အနေအထားသို့ ရောက်အောင် ဆွဲယူပါ။
တစ်ဘက်ကို ၆ ကြိမ်စီ ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(A) ပထမဆုံး ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ခြေဖဝါးချ၍ထိုင်ပါ။ ထို့နောက် ဗိုက်ကြွက်သားကို သုံး၍ ခြေကိုကြမ်းပြင်နဲ့ လွတ်တဲ့ အနေအထားသို့ မတင်လိုက်ပါ။ ခါးဆန့်နေပါစေ။
(B) ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို တစ်ဖက်သို့လှည့်ယူပြီး လက်နှစ်ဘက်ကို ကြမ်းပြင်နှင့်ထိပါ။
ဘက်မပြောင်းခင် ၈ ကြိမ်မှ၁၀ ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
(A) ကိုယ်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့လှဲလျက်၊ ဒူးကို ရင်ဘတ်နှင့်ထိအောင် ကွေးပြီး ခြေထောက်မပြေ စေရန် လက်ဖြင့်ထိန်းထားပါ။
(B) အသက်ရှူ၊ ဗိုက်ကိုရှပ်၍ ထိုင်ရက်အနေအထားသို့ ရောက်အောင် ဆွဲထူပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ၊ မြီးညောင်ရိုးနေရာမှာရှိပါစေ။
(A) ပက်လက်အနေအထားနှင့် ဒူးကိုကွေးပြီး လက်နှစ်ဘက်ကို ခေါင်း အောက်တွင်ထားပါ။
(B) ညာခြေကို ဆန့်ရင်း ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို ဘယ်ဘက် ဒူးဆီသို့လှည့်ပါ။ ဘက့်ပြောင်း၍ ဘယ်ခြေကိုဆန့် ညာဒူးဆီသို့လှည့်ပါ။
** အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (၁) မှ (၆) ကို ဆယ်မိနစ်အတွင်း (၂) ခေါက်ပြည့်အောင် ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။ တစ်ပတ်ကို ၃ကြိမ်ပဲပြုလုပ်ပေးရမှာမို့၊ နေ့တိုင်းလုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက်လည်း အသုံးဝင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ပျိုမေတွေ ကျန်းကျန်းမာမာနှင့် သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေ ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ ရှင်။
Rihanna ရဲ့ Herringbone ကျစ်ဆံမြီး ကျစ်နည်း (Rihanna's Herringbone Braid)
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:24 PM ဆံပင်
Herringbone braid နဲ့ Rihanna
မနေ့က ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ကောစ်မိုပေါ်လစ်တန် (Cosmopolitan) မဂ္ဂဇင်း "8 braids to wear all summer" မှာ Celebritiesတွေ ရဲ့ ကျစ်ဆံမြီးပုံစံလေးတွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။ တခြား ပုံလေးတွေထက် အမြင်ဆန်းတာမို့ Herringbone braid ကျစ်နည်းကို အသစ်အဆန်း လုပ်ချင်တဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဆင့် ၁ : ဘီးဖြီးပါ။ ကျစ်တဲ့ အခါမှာ ငြိတာတွေထုံးတာတွေ မရှိစေဖို့ ဆံပင်ကို ဘရပ်ရှ် တစ်ခုနဲ့ ရှင်းအောင် ဖြီးပေးပါ။
အဆင့် ၂ : ဆံပင်ကို ကိုယ်ကျစ်မယ့်အနေအထားလောက်ယူပြီး နှစ်ဘက် ခွဲပါ။ တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် ညီပါစေ။ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ဆံပင်စနှစ်စ ကို လက်နဲ့ ကိုင်ထားပါ။
အဆင့် ၃ : ညာဘက်ဘေးစွန်း က ဆံပင် ခပ်ပါးပါးကို ယူပြီး ဘယ်ဘက် ထဲကိုထည့်ပါ။ (ပုံကြည့်တာက ပိုရှင်းမယ်နော)
အဆင့် (၄) : အရှေ့ အဆင့် မှာ လုပ်သလိုပါပဲ။ ညာဘက်အစား ဘယ်ဘက်ရဲ့ အပြင်က ဆံစကိုနည်းနည်းယူ၊ ညာဘက်ထဲထည့်။ လက်ပြောင်းပြီးကိုင်ရင်ပို အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့။
အဆင့် (၅) : တစ်ဘက်တစ်လှည့်ဆီဆက်ကျစ်သွားရုံပါပဲ။ ဆံပင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ချင်ရင်ကျစ်တဲ့ အခါမှာဆံစကိုတင်းအောင်ဆွဲပြီး ကျစ်သွားပေးရပါမယ်။ ကပိုကရိုလေးဆိုရင်တော့၊ ဆွဲမကျစ်နဲ့ပေါ့နော်။
Fearne Cottonရဲ့ Herringbone အပွ
အပိုဆောင်းအနေနဲ့ မနေ့က ဖတ်တဲ့ ဆောင်းပါးမှာပါတဲ့ နွေရာသီအတွက် ကျစ်ဆံမြီး ပုံစံလေးတွေကို ပျိုမေတွေ အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်သူပျိုမေတွေ လှသည်ထက် လှနိုင်ကြပါစေရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:05 AM မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
ဒီဂျူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာ ကျွန်မ မြန်မာပြည် ခဏပြန်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေ သိကြတဲ့ အတိုင်း ရန်ကုန်မှာ blogspot တွေ banned ထားတော့၊ ဘေ​လာ့့ေ​လး​မှာ​အသစ်အ​သစ်​တ​င်ေ​ပး​ဖို့အ​တွက် အ​ခက်အ​ခဲ​ရှိနေ​ပါ​တ​ယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့၊ ခွကျော်ပြီး ဝင်ခဲ့ပါ့မယ်နော်။
ဝေးနေတဲ့ သုံးပတ် အတွင်းမှာ ကျွန်မရဲ့ ဘလော့လေး ကို မမေ့သွားကြပါနဲ့လို့။
ဝိုင်းဝန်း အကြံပေးကြတဲ့ blogger ညီအစ်မ များနဲ့ သနပ်ခါးမေ ဘလော့လေးကို ပုံမှန် ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုအားပေးြ​ကတဲ့ ပျိုေ​မအေ​ပါ​င်း​ကို​ကျေး​ဇူး​တင်လျ​က်-
By **~ မြတ်ကြည်~** 11:13 PM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
မနေ့က ကျွန်မ ကျောင်းက ညီမလေး နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ "ဘာ တင်ရမှန်း မသိလို့ အကြံပေးပါဦး"လို့။ ဒီအတိုင်းကောင်းနေရက်နဲ့ ပျိုမေတွေစိတ်မဝင်စားလောက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ တင်မိမှာစိုးတယ်လေ။ သူက "အစ်မ၊ Sunscreen ဘယ်လိုရွေးရမယ် ဆိုတာလေး သိထားရအောင်၊ တင်ပေးပါလား?" လို့ အကြံပေးတာနဲ့ ဒါလေးကို ရှာတွေ့သွားတာပါ။
SPF ကတော့ ပျိုမေတွေတော်တော်များများ ရင်းနှီးနေတဲ့ စကားလုံးဖြစ်မှာပါ။ SPF နံပါတ် အမြင့်တွေက နိမ့်တဲ့ SPF တွေ ထက် နေလောင်ဒဏ် ပို ကာကွယ်နိုင် တယ်ဆို တဲ့ အယူအဆ အလွဲလေး၊ ကျွန်မမှာလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ Sunscreen အတွက် ပျိုမေတွေ ဈေးဝယ်ထွက်တော့မယ်ဆို ရွေးချယ်ရလွယ်အောင် ကြိုပြီးသိထားစရာ လေးတွေ ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။
နံပါတ် ၁ အနေနဲ့ ကတော့၊ ကိုယ့်အသားရောင် ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့။နေရောင်အောက်မှာရပ်နေတဲ့သူ အတူတူ အသားဖြူတဲ့သူတွေဟာ၊ ဝါတဲ့၊ ညိုတဲ့သူတွေထက် နေလောင်ဒဏ်ကို ပိုမြန်မြန် ခံစားကြ ရ တတ် ပါတယ်။ မြန်မြန် နီလာတတ်တဲ့ အသားရေမျိုး ရှိရင် နံပါတ်မြင့်တဲ့ SPF လိုမှာပါ။
SPF ရဲ့ အရှည်က Sun Protection Factor ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနံပါတ်လိမ်းထားရင် နေရောင်ထဲမှာ အချိန်ဘယ်လောက်ခံနိုင်မလဲ ဆိုတာသိဖို့ အတွက်အချက် နည်းနည်း လုပ်ပေးရမှာပါ။ သင်ရွေးမယ့် SPF နံပါတ်ကိုယူပြီး ၁၀ နဲ့ မြှောက်ရင် ရတဲ့ ဂဏန်းက နေရောင်ထဲမှာ စိတ်ချလက်ချ သွားနိုင်တဲ့ (ကိုယ့်ကို နေလောင်ဒဏ်ကနေ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးထားနိုင်တဲ့) မိနစ်အရေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ SPF၂၀ x ၁၀ = ၂၀၀ မိနစ်
ချွေးထွက်ရင် ဒါမှမဟုတ် ရေထဲမှာရှိရင်၊ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အချိန်က နဂိုထက် ပိုတိုတာကို ချွင်းချက် အနေနဲ့ သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နံပါတ်ပဲရှိနေနေ၊ စိတ်ချရအောင် ၂နာရီခြားတစ်ခါလောက် ပြန်ပြီးလိမ်းပေးသင့်တယ် လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
UVAက လူကို အိုမင်းရင့်ရော်စေ ပြီး၊ UVB က နေလောင်ခြင်းနဲ့၊ အရေပြားကင်ဆာ ရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝယ်မယ်ဆိုရင် "UVA/UVB" ဒါမှမဟုတ် "broad spectrum" လို့ရေးထားတဲ့ product တွေကိုသုံးပေးစေချင်ပါတယ်။
Water Proof နဲ့ Water Resistance
ရေကူးမယ်ဆို Water Proof နဲ့Water Resistance ကိုရွေးပါ-။ Waterproof က မိနစ် ၄၀ ခံပြီး၊ water resistance က မိနစ် ၈၀ ခံပါတယ်။
နောက်ဝယ်ရင်၊ ဘယ် SPF နံပါတ်၊ ဘယ် အမျိုးအစား ရွေးရမယ်ဆိုတာကို အချိန်ကုန်စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ပါဘူးနော်။ ပျိုမေတွေလည်း နောင်လာမယ့် နေ့ရက်တိုင်းမှာ နေရောင်ခြည်ဒဏ် ကို ကာကွယ်မှုအပြည့်နဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
ဒီဆောင်းပါးလေးက Jen Adkins ရေးထားတဲ့ Is high SPF level the best Option for Sunscreen? နဲ့ Lisa Fayed ရေးထားတဲ့ How to choose the best Sunscreen ကို မှီငြမ်းရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ( မေသူရေ၊ ကျေးဇူးပါနော်)
သူကိုင်ထားတာ Louis Vuitton အစစ်လား? How to Spot Fake Louis Vuitton
By **~ မြတ်ကြည်~** 2:43 AM တိုတိုထွာတွာမှတ်စရာ
ဒီကို ရောက်ရောက်ချင်းက 'က' ကြီးမ တွေချမ်းသာလှချည်လားပေါ့၊ Louis Vuitton တွေ လူတိုင်းမှာကိုယ်စီကိုယ်စီ၊ ဟန်ပန်တွေကလည်းကောင်းမှကောင်း။ မြောင်ဒုံ ရောက်တော့မှ ဒီမှာလဲ အတုတွေကို မှီဝဲကြမှန်း သိရတာပါ။
ကျွန်မက မိန်းမ ပီသတဲ့သူဆိုတော့လေ၊ သိတယ်မဟုတ်လား? လိုက်ကြည့်စရာ တစ်ခုတိုးလာတာပေါ့။ အိတ်တွေကို ဂျီဟားချော (MRT/ tube) စီးရင်း အတုအစစ်ခွဲရ တာ ပျော်စရာပါ။ ပေါ်တင်ကြီးတော့ မကြည့်နဲ့ပေါ့နော်။
ဈေးကြီးတဲ့ အတုကို မတတ်နိုင်တဲ့ လူတွေက သံတူကြောင်းကွဲလေးတွေကို ဝယ်ကိုင်ကြပါတယ်။ ဒေါ်လာ၁၃၀ ထိရှိတဲ့ အတုလဲရှိတာကိုး။
2) ရေးထားတဲ့၊ ပုံလေးတွေက ချုပ်ရိုးကြားထဲ ဒါမှမဟုတ် ကြယ်သီး ချုပ်ရိုးကြားထဲ တပိုင်းတစ ရောက်နေတာ တွေ့ရင် အတုပါ။ အစစ်တွေမှာအိတ်ချုပ်ပြီးမှလက်နဲ့ ဆွဲတာကြောင့် ပုံတွေက ချုပ်ရိုးတို့၊ ကြယ်သီးတို့နဲ့လွတ်ပါတယ်။
3) အိတ်တွေရဲ့ကိုယ်ထည်ဟာ canvas နဲ့ လုပ်တာဖြစ်ပေမယ့်၊ လက်ကိုင်နဲ့ ဘေးကလိုင်းတွေက သဘာဝ cowhide သားရေ leather နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ဝယ်ချင်းမှာ သာရောင်နုနုရှိပြီး၊ ကိုင်တာကြာရင် oxidize ဖြစ်ပြီး အညိုရင့်ရောင်ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဘေးသားအစွန်းတွေက နီဖန့်ဖန့် အရောင်နဲ့ လက်ကိုင်ချုပ်ရိုးက အဝါရောင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အိတ်ကနွမ်းနေပါလျက်၊လက်ကိုင်က ညိုမသွားပဲ အသားရောင်အတိုင်းပဲဆိုရင် သေချာပါတယ်။ အတုပါရှင်။
4) နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ လူရိပ်လူကဲပါပဲ။ LV ကို တော့လွယ်ထားပါရဲ့၊ တခြားအပြင်အဆင်တွေက LV ကို မလိုက်နိုင်ရင်ပေါ့။ LV အစစ်ရဲ့ အောက်ထစ်ဈေးက USD$ 350 ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လို့ အိတ်တစ်ခုတည်းကောင်းကောင်း ကိုင်တဲ့လူတွေလည်း ရှိတတ်တာပါပဲလေ။ ဒါက၊ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်။
ပျိုမေတို့ရေ၊ ဒါလောက်ဆိုရင်၊ သိချင်တာလေးတွေ သိလို့ရပြီပေါ့။ ကိုယ်တိုင်က အစစ်ကို ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့၊ အတုအစစ်ကို အသေးစိတ်ကြည့်နိုင်ဖို့